﻿‘फोरमसँग एकता हुनको लागि उपेन्द्र यादव सडकमा आउनुपर्छ’ | Citizen Post News
﻿‘फोरमसँग एकता हुनको लागि उपेन्द्र यादव सडकमा आउनुपर्छ’
२०७५ साउन १४ गते १६:१०
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग संविधान संशोधन हुनेबारे आफूहरुको पूर्ण विश्वास र भरोसा रहेकोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले फिर्ता हुँदैन । फिर्ता लिनेबारे हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म कुनै योजना बनाएको छैन । यो सरकार दुई तिहाईको हो । संविधान संशोधनको लागि सरकारले पहल गर्नेमा हामी आशावादी छौं । हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’
रिपोर्टर्स क्लबमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेता महतोले भने,‘हामी सरकारको रवैया र व्यवहार हेरेर अघि बढ्छौं । सरकार जसरी अघि बढ्छ, हामी पनि त्यसैगरि अगाढि बढ्छौं । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्नेबारे समय आएपछि योजना बन्ला । तर अहिले हाम्रो कुनै योजना छैन ।’ महतोले आफ्नो पार्टी अहिले सरकारमा सहभागी हुने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामी सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन ।’ सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भन्नेमा आफूहरु पूर्ण रुपमा आशावादी भएकोले यदि संशोधन नगरे त्यसपछि आफूहरुले दबाई गर्न जानेको उनले बताए । महतोले थपे,‘अहिले नै दबाई गर्ने बेला भएको छैन् ।’
पार्टीको महाधिवेशनबाट सहमतिमै नेतृत्व चयन गरिनेपनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘हामी सहमतिमै महाधिवेशन सम्पन्न र्छौं । पार्टीको नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनापनि सहमतिमै टुँगो लगाउँछौं ।’ पार्टीको नेतृत्वको लागि प्रतिष्पर्धा नहुने उनको ठोकुवा छ । उनले भने,‘पार्टीको नेतृत्व हामी सहमतिमै टुँगो लगाउँछौं । कुनै प्रतिष्पर्धा हुँदैन । अध्यक्ष मण्डल रहने वा नरहने भन्ने कुरापनि हामी सहमतिबाटै टुँगो लगाउँछौं । पार्टीको निर्णय सामूहिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउँछौं।’
वर्तमान सरकारले काम नगरेकोमा आफूहरुको असन्तुष्ट रहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘सरकारसँग दुई तिहाई छ । हामी हाम्रो माग र सवालहरु पूरा गराउनको लागि दबाब दिईरहन्छौं । भर्खरैमात्रै पनि हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिमाईण्ड गराएका छौं । मुलुकको समस्या समाधान गर्नुहोस । दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी जनताको सवालहरु संविधान संशोधनमार्फत हल गर्नुहोस भनेर दबाब दिएका छौं । अहिलेसम्म संविधानको पालना भएको छैन । जनताले नागरिकता पाएका छैनन् । जन्मसिद्ध नागरिकले पनि नागरिकता पाएका छैनन् ।’
मधेश आन्दोलन ताका नेता तथा कार्यकर्तालाई लगाईएको झुठा मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई गर्नपनि आफूहरुले दबाब दिएको उनले सुनाए । उनले भने,‘१५÷२० हजार मान्छे मार्नेहरु प्रधानमन्त्री भैसके । उनीहरुलाई रेड कार्पेट ओछ्याईसके । यही हो लोकतन्त्र ? रेशम चौधरीलाई अहिलेसम्म सांसदको प्रमाणपत्र बुझ्ने वातावरण बनाईएन ? सरकारको भनाई र गराईमा एकरुपता हुनुपर्छ । भन्ने एउटा अनि गर्ने अर्को गर्नुभएन ।’ सरकारलाई दिएको रिमाईण्डर पनि कुनै सुनुवाई नभए आफूहरु कडाईका साथ अल्टिमेट दिएर अघि बढ्ने उनको चेतावनी थियो ।
नेता महतोले नेपालले दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने,‘हामीले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ । दुवै छिमेकीसँग हाम्रो नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध छ । हामीले दुवैसँग अति विश्वसनीय सम्बन्ध राख्नुपर्छ । दुईवटै छिमेकीसँग निकटतम् सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।’ काठमाडौंमा भारत र चीन कुन देशबाट पहिले रेल आउँछ त भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘कुन रेल आउँछ, के–के आउँछ, रेल, जहाज, कहिले आउँछ भन्ने कुरा सरकारलाई सोध्नुहोस । जहिले आउँछ, आउँछ । जनताले हेरिरहेका छन्, विकास हुनु राम्रो कुरा हो ।’
फरक प्रसँगमा उनले राजपा र फोरमबीचको एकताको पनि अहिले कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘उपेन्द्र यादवजी सरकारमा हुनुहुन्छ, हामी सडकमा छौं । अनि कसरी एकता हुन्छ ? त्यसैले अहिले एकता सम्भव छैन । एकताको लागि त उपेन्द्रजी हामी बसेको ठाउँमा आए हुन्छ ।’ यद्धपी उनले प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा राजपा र फोरमको गठबन्धन भने कायमै रहने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘५ वर्षमात्रै होईन, १० वर्षसम्म रहन्छ ।’
त्यस्तै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगको आफ्नो पार्टीको सम्बन्ध पनि गुण र दोषको आधारमा कायम रहने जनाए । उनले भने,‘सबै एजेण्डामा सहमति हुँदैन, एजेण्डाका आधारमा हाम्रो उहाँहरुसँग सम्बन्ध कायम रहन्छ ।’
'प्रचलित रुढीवादी परम्परा र संस्कारलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ'
२०७५ चैत्र ६ गते १९:२२
डिज्ने र फक्सबीच ७१ अर्ब डलरको हलचल ल्याउने सम्झौता
२०७५ चैत्र ६ गते १४:५४
‘सिल्क रोड’ र हुवावे विवादबीच चिनियाँ राष्ट्रपति सीको यूरोप यात्रा
२०७५ चैत्र ६ गते १४:३१
वीर अस्पतालमा पुनः सल्बलायो भ्रष्ट समूह
२०७५ चैत्र ६ गते १३:५४
निर्मला पन्त प्रकरणः प्रहरीको सवै प्रयास फेल, मोडियो अनुसन्धान
२०७५ चैत्र ६ गते १३:१७
एक दिने दन्त शिविर सम्पन्न: दुई सयले लाभ लिए
२०७५ चैत्र ६ गते ११:०२
शान्ति-सुरक्षामा भन्दा डिएसपीको मन दुगडको चाकडीमा
२०७५ चैत्र ६ गते १०:२२
हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै रंगहरुको पर्व फागुपूर्णिमा अर्थात होली
२०७५ चैत्र ६ गते ०९:५७
जेनेभा सम्वोधनले भारतमा भुईंचालोः गोर्खाली सेनाको लास नेपाल पठाउन माग
२०७५ चैत्र ५ गते २३:०६
वेलकमले 'स्वच्छ होली, खेलौ मन खोली' भन्दै होली पर्व मनायो
२०७५ चैत्र ५ गते २१:५९
साफ महिला फुटबलः फाइनलमा नेपाल-भारतबीच भिडन्त हुने
२०७५ चैत्र ६ गते २०:५१
साफ महिला फुटबलः नेपाल फाइनलमा प्रवेश
२०७५ चैत्र ६ गते १५:२६